दु:ख भएपछि शहर भन्दा आफ्नै गाउँ ठिक भन्दै लालाबाला च्याँपेर घर फर्किए सर्वसाधारण ! – Online Nepal
दु:ख भएपछि शहर भन्दा आफ्नै गाउँ ठिक भन्दै लालाबाला च्याँपेर घर फर्किए सर्वसाधारण !
April 23, 2020 323
नारायण न्यौपाने – ‘दुःखमा जन्मभूमि’ र ‘विपत्मा आफन्त’लाई सम्झन्छन् भन्ने उदाहरणका रुपमा मङ्गलबार र बुधबार साँझ कलङ्की र जडीबुटीमा देखिएको भीडले पुष्टि गरेको छ । कोभिड–१९ को जोखिम हुन नदिन लकडाउन जारी रहेपछि व्यापार, व्यवसाय र रोजगारी गुमेर समस्यामा परेका श्रमिक र न्यून आय भएका व्यक्ति कुम्लो कुटुरोसहित लालाबाला च्याँपेर घर फर्कन घुइँचो गरेको त्यो स्थानमा देखियो । मुलुकका कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि लकडाउन कारण राजिरोटीको समस्याले बिचल्लीमा परेका आफ्ना नागरिकको उद्धारमा त्यहाँ जुटिरहेको देखिन्थ्यो ।
उक्त नगरपालिकाले मङ्गलबार १३ र बुधबार १० वटा बसको व्यवस्था गरी समस्यामा परेका नागरिकलाई उद्धार गरेको थियो । विपद्मा परेका त्यस्ता नागरिकलाई नगरपालिकाले आफ्नै खर्चमा घर पु¥याउने व्यवस्था गरेको नगरप्रमुख थापामगरले जानकारी दिनुभयो ।
लकडाउनका कारण रोजिरोटी गुमेर काठमाडौँ उपत्यकामा बस्ने अवस्था नरहेपछि घर फर्कन चाहनेलाई स्थानीय तहले जन्मथलो लैजाने व्यवस्था गरेका हुन् । स्थानीय तहले त्यस्ता घर फर्केका नागरिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने राहत र औषधिका लागि तथ्याङ्कसमेत सङ्कलन गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय तहले त्यसरी घर फर्केका नागरिकलाई आफ्नो बाँझो जमिन खनिखोस्री बालीनाली लगाउन र त्यसकालाई आवश्यक बीउ मलखादको व्यवस्था गरी उत्प्रेरणा जगाउन कामसमेत गर्ने भएका छन् । जडीबुटी क्षेत्रमा त्यसरी घर फर्कन चाहने दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप, ओखलढुङ्गा, सिन्धुपाल्चोकलगायत जिल्लाका यात्रुको भीडलाई व्यवस्थापन गर्न भक्तपुरका प्रहरी प्रमुखको नेतृत्वको सुरक्षा टोलीलाई हम्मेहम्मे परेको देखिन्थ्यो ।
जडीबुटी र कलङ्की क्षेत्रमा काठमाडौँ जिल्लाका प्रहरी प्रमुखसहित ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षा फौज यात्रुको व्यवस्थापनमा खटिनुभएको थियो । भीडलाई व्यवस्थापन गर्न र यात्रुलाई गाडी चढ्नका लागि अन्योल पैदा नहोस् भनेर प्रहरीले माइकबाट कुन ठाउँका लागि कहाँ बस छुट्दैछ भनेर सूचना दिइरहनुभएको थियो । ती दुवै स्थानमा दशैँको फूलपातीको दिन जस्तै घर फर्कनेको भीड देखिन्थ्यो ।
विपद्मा परेका यस्ता नागरिकलाई घर फर्काउने कार्यमा स्थानीय तहका मात्रै होइन कलङ्कीमा सांसद टोपबहादुर रायमाझीले समेत सहजीकरण गरिरहनुभएको पाइयो । उद्धार गरी लगेका नागरिकको स्थानीय तहमा कोभिड–१९का सम्बन्धमा सामान्य स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्थासमेत मिलाइएको जानकारी दिइएको छ । सिन्धुलीको तीनपाट गाउँपालिकाका उपप्रमुख पदममाया तामाङ पनि लकडाउनमा अलपत्र परेका नागरिकको उद्धारका लागि बुधबार राति अबेरसम्म जडीबुटीमा खटिरहनुभएको थियो ।
लकडाउनले हजारौँ व्यक्तिलाई जन्मथलो पु¥याएको छ । ठूलो सङ्ख्यामा सर्वसाधारण घर फर्किएसँगै खाद्यान्न सङ्कटको सम्भावना भए पनि खेतीपाती लगाउने ठीक समय भएकाले कतिपय बाँझो जमिन खनीखोस्री गरेर बाली लगाउन उपयुक्त अवसर मिल्नेछ । कोभिडबाट सिर्जित लकडाउनले घर परिवार सँगै रहेर जन्मथलोमा पुगी स्थानीय उत्पादन बढाउन र विकास निर्माण कार्यमा सहकार्य गर्ने एकखाले वातावरण सिर्जना गरेको छ ।
गाउँमा खेतीपातीसगँै दशैँ तिहार झैँ चहलपहल
दिपायल सिलगढी नगरका प्रमुख मलासीले नगरपालिकाका सबै वडामा वितरण सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । राहत मिलेपछि केही दिनका लागि भए पनि समस्या समाधान भएकोस्थानीय रामबहादुर कामीले बताउनुभयो ।
Prevएसईईका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस्तो निर्णय गर्दै ! यसरि हुने छ परिक्षा !
Nextआज मातातीर्थ औंसी : अपाङ्गता भएका छोरालाई आमाको माया…